Kedu ihe m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ala ụlọ akwụkwọ ọta akara na-emebi emebi mgbe mgbe? Nwere ike ịchọrọ ịnwa akwa PVC na-eguzogide-News-Topflor China nwere oke
Echiche:47 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Kindergartens bụ ebe ụmụaka na-eto eto ma na-eto. Ihe ndị dị n'ala ụlọ nwere njikọ chiri anya na ndụ nke ụlọ akwụkwọ ọta akara. Uzo nke ihe ala di kwa metutara aru na nchekwa umuaka. Yabụ, a ga-ahọpụtara ihe ịchọ mma nke ụlọ akwụkwọ ọta akara.
Mana n'eziokwu, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ ihe eji achọ mma nke bara uru maka uto ahụike nke ụmụaka, ihe mbụ ị kwesịrị ị toa ntị bụ "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ", "nchekwa" na "nchekwa gburugburu ebe obibi", ọ bụghị naanị nke a, kamakwa ndị ọzọ Njirimara nke ala! topflor na-akpọrọ gị mara PVC ala ihe kwesịrị ekwesị maka ụlọ akwụkwọ ọta akara.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ndị a na-anọ n'ime ụlọ akwụkwọ ọta akara na-abụkarị ụlọ PVC. Ala bụ ebe ụmụaka na-anọkarị. Ha na-enwe mmasị ịtụgharị, gbaa ọsọ, ịgụ akwụkwọ na igwu egwuregwu na ala. Ya mere, ala ahụ kwesịrị ịdị na gburugburu ebe obibi, ma dịkwa mkpa ịnweta mgbochi skid, dị ọcha, na-agbachi nkịtị, na-agbanwe ma na-arụ ọrụ na-eguzogide ọgwụ. Ihe ala nke ụlọ akwụkwọ ọta akara kwesịrị ịnwe mmetụ dị mma iji gboo mkpa nke uto ụmụaka.
Floorkwanyere flooring nwere ibu sikrob eguzogide, mmetọ eguzogide, mmiri na-eguzogide, alkali eguzogide na ogologo ọrụ ndụ, na aghọwo ọhụrụ mmasị nke ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọta akara.
Floorlọ ụlọ akwụkwọ ọta akara nke PVC anaghị egbochi mmiri, onye nkụzi nwere ike ịsacha ya ozugbo, mana ọ naghị atụ aro ka mmiri mmiri PVC nkịtị mee ogologo oge, nke dị mfe iji belata ọrụ ndụ.
Floorlọ PVC bụ ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi: 100% ihe ọkụkụ ọhụrụ, gụnyere ntụ ntụ PVC, ntụ ntụ, ihe ndị na-edozi ahụ, ndị na-edozi ahụ, ọ dịghị ihe ọ bụla e-phthalate, 100% recyclable, nke enweghị ọla dị arọ, DOP, VOC, arọ ọla, Formaldehyde na benzene zutere ọkwa dị elu French A + maka asambodo gburugburu ebe obibi.
Floorlọ PVC bụ ihe dị ọcha: 100% mmiri na-adịghị mmiri, PVC na mmiri enweghị njikọ, ọ gaghị akpụzi n'ihi oke iru mmiri. N'ebe ndịda ndịda nwere oge mmiri ozuzo karị, ala agaghị agbanwe agbanwe n'ihi mmiri, nke bụ ezigbo nhọrọ maka ụlọ akwụkwọ ọta akara.
Oke akwa PVC na-eguzogide na-agaghị emebi ngwa ngwa, na-enye ụmụaka ohere ịgba ọsọ na ya. Mgbochi-ebu, mgbochi nje, ntụpọ na-eguzogide, dị mfe ihicha, kwụsie ike ma ọ bụghị nkwarụ.
Enwere ike ịmepụta ala PVC na-eyi uwe na otu ejiji n'otu usoro ụlọ akwụkwọ ọta akara, na-enye ụmụaka ebe ụlọ akwụkwọ ọta akara dị iche iche.